၂၁ ရုပ်ရှင်သည်အခြားမိုးမဟုတ်သောမိုးရာသီနေ့စွဲစိတ်ကူးများ - လိင်-အချစ်-ဘဝ
miodrag ignjatovic ဖြစ်သည်
ဟေ့စာဖတ်သူ သင် ၀ ယ်ယူရန်အပိုင်းများပါ ၀ င်သောစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုပေါ်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေး ၀ ယ်နည်းပညာအသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်ကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့် ၀ က်ဘ်တွင် ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာများကိုအကြံပြုခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Gap နဲ့ Walmart တို့လိုလက်လီအရောင်းဆိုင်နှစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်ပါပြီ။ သင် desktop သို့မဟုတ် mobile ကိုကြည့်သည်ဖြစ်စေ၊ စျေး ၀ ယ်အိတ်သင်္ကေတပါ ၀ င်သည့်စွဲမက်ဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းတိုင်းသည်သင်ပြင်ဆင်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုချက်ချင်းစျေး ၀ ယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းထဲကိုရောက်နေပြီလား။ ထုတ်ကုန်၏ဘယ်ဘက်မှ desktop နှင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ညာဘက်ကိုရွေးပါ။ ပျော်ရွှင်သောစျေးဝယ်ပါ။
သင့်ဆံပင်ကိုပျက်စီးစေသည့်အပြင်မိုးသည်ပြင်ပနွေ ဦး နှင့်နွေရာသီရက်များကိုဖျက်ဆီးသည့်အလေ့အထရှိသည်။ ချစ်စရာလက်ငင်းပျော်ပွဲစားထွက်မလား။ မေ့လိုက်ပါ။ အဲဒီ့ပြင်ပဂီတပွဲတော်လား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ရုတ်တရက်မိုးသက်မုန်တိုင်းတစ်ခုချိန်းတွေ့ရန်သင်၏အစီအစဉ်များကိုနှောင့်ယှက်သောအခါသင်၌ရွေးချယ်မှုအချို့ရှိသည်။ မော်နီကာ၏ Barbados ဇာတ်လမ်းတွဲမှဖြစ်သည် သူငယ်ချင်း (ခ) တူညီသောပျော်စရာကောင်းသောအိမ်တွင်းလှုပ်ရှားမှုကိုရွေးချယ်ပါ၊ (ဂ) အိမ်မှမထွက်ခွာဘဲဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးသွားနေမည့်အစားအတူတူနေပါ၊ ()) နောက်ဆုံးမိနစ်မိုးရေ ၀ င်ရန်တောင်းသောသူဖြစ်ပါစေ (ထိုလူမဟုတ်ပါ) မရ။
ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းရဲ့ backup plan အတွက်နည်းနည်းလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောခြောက်သွေ့တဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရုပ်ရှင်ရုံကိုသွားချင်တဲ့အခါဒီဂန္ထဝင်မိုးရာသီနေ့စွဲစိတ်ကူးအချို့ရဲ့စာရင်းကိုဒီမှာပြပါ။
ယဉ်ကျေးပါစေ။ ဖျော်ဖြေပွဲ (သို့) ပြဇာတ် (သို့) ဟာသပြပွဲ (သို့) ဟာသပြပွဲတခုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုမသိဘဲစျေးအသက်သာဆုံးထိုင်ခုံတွေကိုဖမ်းပါ။ သင်အကြိုက်ဆုံးတီးဝိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ကြောက်စရာကောင်းလာလျှင်ပင်အနည်းဆုံးခြောက်သွေ့သွားလိမ့်မည်။
ကလေးများကဲ့သို့ပြုမူပါ။ မင်းအိမ်ထဲမှာသူတို့ကိုအခွံမာတွေမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းမိဘတွေကမင်းလုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ Arcade တစ်ခုတွင်ကစားခြင်း (roller retro!) (စကိတ်စီးခြင်းစကိတ်စီးကွင်း) သို့သွားခြင်းသည် sulking ခြင်းထက်များစွာပိုပျော်စရာကောင်းသော indoor activity တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဈေးသွားပါ။ ငါတို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့ကုန်တိုက်ရက်တွေအကြောင်းငါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ပျော်စရာဂိမ်းအသစ်တစ်ခုလိုမင်းနှစ်ယောက်စလုံးအတူတကွလုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသွားဝယ်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်ဝိုင်အသစ်တစ်ခုစမ်းဖို့နိုင်ငံတကာကုန်ခြောက်စတိုးဆိုင်ကိုတိုက်ပါ (လက်ဘနွန်နဲ့ဂျော်ဂျီယာတို့လိုနိုင်ငံကြီးတွေရှိတယ်) ။
ဒေသခံအရက်အခင်းအကျင်းကိုကြည့်ပါ။ မင်းရဲ့ဒေသမှာလက်လုပ်ဘီယာချက်စက်ရုံ၊ အရက်ချက်စက်ရုံ၊ ဝိုင်ချက်ရှိပါသလား။ သူတို့မှာရနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်တွေ၊ အရသာတွေရှိလား၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားခုန်ပျံကျော်လွှားတဲ့နေ့တစ်နေ့လုပ်မလား (Uber မင်းရဲ့ DD သာဖြစ်ပါစေ) ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဂိမ်းကစားပါ။ ရေကူးကန်ခန်းမများသည်အခြေခံအားဖြင့်သက်ကြီးတန်းများဖြစ်သည်။ သာယာလှပသောနွေ ဦး နေ့တွင်ညစ်နွမ်း။ မှောင်သောဘားအတွင်း၌ရှိနေခြင်းသည်အလဟသဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အေးပြီးမိုးရွာသည်ကိုပြီးပြည့်စုံစွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ရေကူးကန်ကမင်းရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် Ping-Pong ဒါမှမဟုတ်ဗွီဒီယိုဂိမ်းလိုမျိုးအခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကမ်းလှမ်းတဲ့အရာကိုရှာပါ။
ကော်ဖီဆိုင်သို့မဟုတ်ဝိုင်ဘားသို့သွားပါ။ စည်ကားသောလမ်းတစ်ခု၏မြင်ကွင်းနှင့်အတူကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုတွင် cappuccino သို့မဟုတ်ဝိုင်နီတစ်ခွက်ကိုခံစားပါ။ မင်းအပြင်မှာလူတွေစိမ်နေတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့မှင်တက်စရာအချစ်ရေးဘဲဖြစ်ဖြစ်ရယ်စရာရယ်စရာဘဲ။
ကလေးများအားဗွက်အိုင်များကဲ့သို့ပစ်ပါ။ သင်ယခုစျေး ၀ ယ်သွားသောမိုးရာသီဖိနပ်အသစ်များကိုသုံးပါ။
ဒါပေမယ့်ဖိနပ်စီးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ Getty ပုံများ
ပန်းခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်ပါ။ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း (လျှပ်စီးမပါလျှင်သာလုံခြုံပါစေ) ပုံမှန်အားဖြင့်လူစည်ကားသောအများပြည်သူပိုင်နေရာကိုသီးသန့်သွားခွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။
memory lane အောက်ကိုခရီးတစ်ခုသွားပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းနှစ်ချုပ်စာအုပ်တွေကိုသွားကြည့်ပြီးမင်းနှစ် ဦး နှစ်ဖက်ဝမ်းနည်းစေမယ့်ဆံပင်ညှပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဖြိုခွဲလိုက်ပါ။
ဂန္ထဝင်များကိုလိုက်ကြည့်ပါ။ သင်တစ်ခါမှမကြည့်ဖူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဟောင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါ။ ငါအကြံပြုနိုင်တယ် မိုးရေထဲမှာသီချင်းဆိုတယ် ?
ဒါမှမဟုတ်အသစ်တစ်ခုခုကိုဝင်ပါ။ မင်းကအစွဲအလမ်းမကြီးတဲ့မင်းသူငယ်ချင်းတွေထဲကတစ်ယောက်တည်းလား ဧဝကိုသတ် ရှိသေးလား။ ကိုယ်လည်းပဲ။ မိုးရွာတဲ့နေ့ဟာမင်းကြည့်ချင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့တီဗီရှိုးဇာတ်လမ်းတွဲတွေဒါမှမဟုတ်အပိုင်းအားလုံးကိုဖမ်းဖို့ကောင်းတဲ့နေ့ဘဲဒါပေမယ့်မင်းအလှည့်နဲ့တော့တူပုံမရဘူး။
တစ်ရက်စာအုပ်အသင်းကိုဖန်တီးပါ။ အတူတွဲပြီးဖတ်ဖို့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရွေးပါ၊ အဲဒီအကြောင်းကိုပြောပါ။ အိုကေ၊ မင်းစာဖတ်မြန်သူမဟုတ်ရင်ဇာတ်လမ်းတိုဖြစ်နိုင်တယ်။
မီးဆောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းမှာမီးဖိုရှိရင်မင်းသိပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒါဟာအန္တရာယ်များပြီးသက်တောင့်သက်သာမရှိပါဘူး။
ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများကိုလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြင့်ကစားပါ။ မင်း Strip Monopoly ကိုမကစားဖူးဘူးလား။ အခုအချိန်ရောက်ပြီ။
နှစ်ယောက်အတွက်ပူဖောင်းရေချိုးပါ။ အပြင်ဘက်တွင်စိုစွတ်ခြင်းသည်ဒူးအထိစိမ်ထားသောဘောင်းဘီများနှင့်ကျိုးနေသောထီးများကဲ့သို့သောစိတ်အနှောင့်အယှက်ပြဿနာမျိုးစုံနှင့်ကြုံရသည်။ ဒါပေမယ့်အိမ်ထဲမှာစိုစွတ်တာကပိုကောင်းပါတယ်။
Angelina jolie နှင့် brad pitt အိမ်ထောင်ရေး
Luis Alvarez နေရာယူပုံ
ညစာကိုအတူတကွချက်ပြုတ်ပါ။ မင်းဒီညမင်းအစီအစဉ်မှာတခြားဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းနှစ်ယောက်စလုံးတစ်နေ့နေ့မှာဖြစ်လာဖို့အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဟင်းချက်နည်းကိုကောင်းကောင်းကြိုးစားနိုင်လိမ့်မယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးကမီးဖိုချောင်မှာသိပ်မအဆင်ပြေရင်တောင်အတူတကွချက်ပြုတ်တာကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ချက်ပြုတ်နည်းကဇာတ်လမ်းကောင်းတွေအတွက်အမြဲပျက်ကွက်တယ်။
အိုး၊ အဲဒါကိုကျော်ပြီးလိင်ဆက်ဆံပါ။ ပြတင်းပေါက်များကိုဖွင့ ်၍ အချို့သော sexy sound effects များနှင့်အနည်းငယ်စိုထိုင်းမှုတို့ကြောင့်နေ့ည၏အကောင်းဆုံးအပိုင်းသို့သွားပါ။ ပြေးလွှားမှုကိုဖြတ်တောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါမိုး။
2016 victoria ရဲ့လျှို့ဝှက်ဖက်ရှင်ရှိုးမော်ဒယ်များ
dip powder လက်သည်းတွေကိုဖြည့်ပေးနိုင်လား